Multilingual Bible: Nepali (Simple Nepali Holy Bible), Psalms 128
Nepali (Simple Nepali Holy Bible), Psalms 128
1 ज-जसले परमप्रभुका आज्ञा मान्‍दछन् र उहाँका आज्ञाअनुसार जिउँछन्, तिनीहरू खुसी रहन्‍छन्।
2 तिम्रा हातका कमाइ सबै खाँचोहरूको लागि पुग्‍दो हुनेछ, तिमीलाई आनन्‍द र फलिफाप हुनेछ।
3 तिम्रा घरमा तिम्री पत्‍नी फल दिने अङ्‌गुरको बोटजस्‍तै हुनेछिन्‌ र तिम्रा टेबिलका चारैतिर तिम्रा छोरा-छोरीहरू कलिला भद्राक्षका मुनाझैँ हुनेछन्।
4 परमप्रभुको आज्ञा मान्‍ने मानिसले साँच्‍चै यस्‍तै आशिष् पाउनेछ।
5 परमप्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशिष् देऊन्! जीवनभरि तिमीले यरूशलेमले उन्‍नति गरेको देख्‍न पाउनेछौ!
6 तिमीले आफ्‍ना नाति-नातिनीहरू देख्‍न पाउनेछौ! इस्राएलमा शान्‍ति रहोस्!